Ungazikhupha njani ngokulula kwi-imeyile kwiMeyile | Ndisuka mac
Izolo besithetha nge a ingxaki encinci onokuthi uhlangane nayo nokusetyenziswa kweMeyile ye-Mac yakho, namhlanje sithetha ngayo esinye sezibonelelo zokuba okanye usebenzise olu setyenziso I-Apple ilawula iiakhawunti zethu ze-imeyile.
Ku malunga rhuma okanye ususe imirhumo ye-imeyile kwiakhawunti yethu ngendlela elula nekhawulezayo. Olu khetho lubonakala ngokwendalo kwisicelo seMeyile kwaye luqulathe ukuthumela ngokuzenzekelayo i-imeyile yokurhoxisa kwinkonzo yobhaliso.
Susa okanye ungabhalisi kuluhlu lokuposa
Njengoko ubona kumfanekiso ongentla, indlela elula yokuzikhupha kuluhlu lokuposa kukuthumela ngqo i-imeyile ecela ukungabhalisi. Ukwenza oku, kulula njengokujonga iposi esiyifumana kwisicelo seMeyile kwaye Cofa kwindawo ephezulu ekunene apho ithi «Ungabhalisi». Kuyenzeka ukuba kwezinye ubhaliso olu khetho ukuba urhoxise ngokuzenzekelayo aluveli, ke kuya kufuneka ubhalele umthumeli ngesandla ukuze ayeke ukuthumela ii-imeyile.
Iwindow ephumayo iya kubonakala ngokuzenzekelayo apho siza kucelwa ukuba siqinisekise ukuthumela umyalezo we-imeyile ngokungazikhupheli kuluhlu lokuposa. Simele samkele kwaye siya kuva isandi esiqhelekileyo xa sithumela i-imeyile ngemeyile.
Ukusukela ngalo mzuzu ukuya phambili siza kube singabikho ngokupheleleyo kuluhlu lweposi kwaye asisayi kuphinda sifumane eminye imiyalezo evela kule nkampani. Njengoko ufikelela kuluhlu lokubhaliselwa, ezinye iinkampani ziyisebenzisa kwaye zithumele zonke iintlobo zeimeyile kubasebenzisi. Ngokomgaqo banokuba bambalwa kodwa njengoko ixesha lihamba bayadibanisa kwaye oku ekugqibeleni kungagcwalisa ibhokisi lakho leposi nge "spam". Ngaphandle kwamathandabuzo Imeyile ibonelela ngesona sisombululo sisiso kwaye sikhawulezayo ukuyiphepha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Ungazikhupha njani ngokulula kwi-imeyile kwiMeyile